Ooredoo Group and Ericsson sign five-year 5G agreement | Myanmar Business Today
HomeBusinessOoredoo Group and Ericsson sign five-year 5G agreement
“Today’s agreement represents another step in the longstanding and successful partnership between Ericsson and Ooredoo, which enables our company to continue network expansion, enhancement and digital transformation. Ericsson is bringing state-of-the-art global technologies to the countries we operate in, which enables us to provide the latest digital solutions for communities to enjoy the best of the internet, including connecting the most remote areas, supporting start-ups digitally and providing immersive experiences for sports fans at upcoming mega-sporting events,” said Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Deputy Group Chief Executive Officer, Ooredoo Group.
Ericsson will deliveracomprehensive portfolio of telecom services. Under the agreement, Ericsson will provide hardware and software expansions of the core network, radio network and transmission network, as well as enhanced mobile multimedia functionality for new service offerings.
အူရီဒူးအုပ်စုနှင့် Ericsson (NASDAQ: ERIC) တို့သည် 5G ရေဒီယို၊ ပင်မနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Ericsson သည် အူရီဒူးအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကာတာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အီရတ်၊ ကူဝိတ်၊ အိုမန်၊ ပါလက်စတိုင်း ၊ တူနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ‌မော်လ်ဒိုက်ရှိ ကုမ္ပဏီ ၁၀ခုလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ပေါင်းစည်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သဘောတူညီချက်တွင် 10 Gbps အထိ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် MINI-LINK 6000 ပစ္စည်းများပါသည့် Ericsson ရေဒီယိုစနစ်၊ Ericsson Cloud Core၊ Cloud Infrastructure၊ Ericsson Cloud ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပါ၀င်သည်။ ၎င်းသည် အူရီဒူးအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီများအားလုံး၏ လက်ရှိ မိုဘိုင်းကွန်ရက်များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲဖော်ဆောင်ပြီး ခေတ်မီတိုးတက်စေရန် အစမှအဆုံးအထိ 5G အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်များသည် ၀န်ဆောင်မှုအသစ်‌များအတွက် စျေးကွက်သို့၀င်ရောက်မည့်အချိန်ကို သိသာထင်ရှားစွာ ပိုမိုမြန်ဆန်စေမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပိုမိုမြင့်မားလာသော မျှော်လင့်ချက်များအတိုင်း အူရီဒူး၏ ကွန်ရက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
Ericsson ရေဒီယိုစနစ်ကို အူရီဒူး၏လုပ်ငန်းအများစုတွင် စတင်ဖြန့်ကြက်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ အူရီဒူးကာတာ၏ကွန်ရက်တွင် Ericssonရေဒီယိုစနစ်သည် 4G+5G Ericsson လှိုင်းနှုန်းစဉ်မျှဝေခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့မြန်ဆန်သော 5Gကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုကို ဆောင်ရွက်စေနိုင်ခဲ့ သည်။ ထပ်မံပြီး ကမ္ဘာအဆင့်မီအားကစားပြိုင်ပွဲများစွာကျင်းပရန် အူရီဒူးကာတာ၏ ကွန်ရက်ကို ပြင်ဆင်ရာတွင် Ericsson သည် သန်းပေါင်းများစွာသော အားကစားပရိသတ်များအတွက် အားကစားရုံများတွင်ဖြစ်စေ၊ အိမ်တွင်ဖြစ်စေ (သို့) လမ်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်ရန် ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် 5G mid-band Massive MIMO ရေဒီယိုများကို ဖြန့်ကြက်ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အူရီဒူးအုပ်စု၏ Deputy Group Chief Executive Officer ဖြစ်သည့် Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani က “ယနေ့သဘောတူညီချက်ဟာ Ericsson နှင့် အူရီဒူးတို့အကြား ကာလရှည်အောင်မြင်သော စီးပွားရေးမဟာမိတ်လက်တွဲမှု၏ နောက်ခြေလှမ်းတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ကွန်ရက် ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ကွန်ရက်အရည်အသွေးပြည့်စုံစေခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲဖော်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ Ericsson က ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးတာကြောင့် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းများအား အကောင်းဆုံးအင်တာနက်ကို နှစ်ခြိုက်စွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် နောက်ဆုံးပေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်း၊ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများအထိ ချိတ်ဆက်စေနိုင်ခြင်း၊ တည်‌ထောင်ခါစလုပ်ငန်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းစနစ်များဖြင့် ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် လာမည့်အားကစား ပွဲကြီးများတွင် အားကစားပရိသတ်များအတွက် နည်းပညာဖြင့်အတွေ့အကြုံသစ်များကိုပေးစွမ်းခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်စေနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Ericsson သည် အလုံးစုံတာဝန်ယူမူဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ပြည့်စုံသည့်ထုတ်ကုန်များကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သဘောတူညီချက်အရ Ericssonသည် ပင်မကွန်ယက်၏ hardware နှင့် software ချဲ့ထွင်မှုများ၊ ရေဒီယိုကွန်ရက်နှင့် ကွန်ရက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည်တို့ကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုသစ် များအတွက် မိုဘိုင်းမာလ်တီမီဒီယာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်သည်။
Ericsson ၏ ကွန်ရက်ဒီဇိုင်း၊ ဖြန့်ကြက်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့သည် အူရီဒူး၏ အဆင့်မြင့်မာလ်တီမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများသို့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သဘောတူညီမှုအရ Ericsson သည် ပံ့ပိုးမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
The amount of Viagra one takes isafactor for how long it can last in his body. cialis vs viagra Another factor is medication.
Previous articleMyanmar and China ink MoU for Mandalay-KyaukPhyu railway project
Next articleKorea’s POSCO in talks to make $900 million investment